SORATRA FAMPITANDREMANA GRANITE NASAINA NY TANINDRAZANA MANASA 4 PIECES JINAN BLACK GRANITE SURFACE PLATE WITH STAND (GRADE 00) TO CLIENT MALAYIA
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-01-12
Ny takelaka ambony granite avo lenta dia afaka manome fiaramanidina fanovozan-kevitra marina ho an'ny fizahana asa sy ho an'ny rafitry ny asa. Ny haavon'ny haavon'ny haitao sy ny kalitao ary ny asany dia mahatonga azy ireo ho fotony tsara ho an'ny rafitra fandrefesana mekanika, elektronika ary optika be pitsiny. Ny orinasanay dia spe ...
NANORATRA NY IRAY TAMIN'NY IRAY T SLOTS SURFACE FLASOR TRED FOR THE AUSTRALIAN CUSTOMER
Hebei Bocheng mpiara-mamorona fandrefesana fitaovana manamboatra Co., Ltd dia hanome anao ny takelaka vy an-tampon'ny vy, kalitaon'ny fifaninanana ary serivisy aorian'ny varotra Ny orinasanay koa dia manao famolavolana, fampandrosoana ary famokarana vokatra manokana ary manome vahaolana tanjona manokana amin'ny re. ..
Tetikasa vaovao momba ny jiro fanaovana 3D sy 2D amin'ny JOLY, 2020
Vita 3 rafitra 1500x100x200 3D lasitra latabatra ary rafitra 14 miorina 2D ho an'ny mpanjifa avy any Maroc Ny rafitra fitehirizana malefaka dia mitombo amin'ny asanao. Ny firafitra maodelin'ny rafitra lalamby fototra dia manome anao fahalalahana lehibe indrindra amin'ny famokarana singa lehibe kokoa noho ny mahazatra ...